FENOARIVO-ATSINANANA : Tonga nijery ny olam- bahoaka ny Lehiben’ ny Faritra sy ny Depiote
Mampitovy tadin-dokanga amin’ny fikatsahana fampan- drosoana ny Lehiben’ny Faritra Analanjirofo Ramaroson Jacques sy ny Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao Fenoarivo-Atsinanana, Razafindravelo Hermann. 18 mai 2017
Ity farany izay sady filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena ho an’ny Faritanin’i Toamasina.
Ny alarobia 10 mey lasa teo, dia tonga tao amin’ny Kaominina Vohipeno Distrikan’i Fenoarivo Atsinanana ny Lehiben’ny Faritra sy ny solontenan’ny Solombavambahoaka Hermann. Nisy ny fihainoana ireo hetahetam-bahoaka nandritra izany fitsidihana izany.
Voaresaka tamin’izany ny fanamboarana tetezana hiampitana ny reniranon’i Fandramarana. Rano izay tsy maintsy andalovana raha ho ao Vohipeno tampon-tanàna. Misedra olana anefa ny mponina rehefa miakatra ny rano.
Fangatahan’ny mponina ihany koa ny fanamboarana trano fijerevam-baolina sy ny momba ny famatsiana rano fisotro madio ao an-toerana. Namaly ny ampahany amin’ny fangatahan’ny vahoaka avy hatrany ireto delegasiona ireo, ka nampanentana ny fanamborana ilay tetezana eo Fandramarana.
Na dia mbola amin’ny volana jona aza ny iray volana ho an’ankizy , dia nizara kilalao ho an’ireo ankizy madinika tao an-toerana ny Lehiben’ny Faritra.
Mahakasika ilay lalana mampitohy an’Ankobahoba sy Vohipeno izay tena potika tanteraka ka miteraka olana amin’ny famoaham-bokatra, dia nisy famoriana ireo mpandraharaha ara-toekarena nataon’ireo delegasiona tonga tao Vohipeno. Tapaka ary fa amin’ny alalan’ny 3P no hanatanterahana ny asa fanamboarana.
Afa-po tamin’izao fitsidihana izao ireo mponina. Vohipeno izay mahalana no mba misy mpitondra fanjakana tonga mihaona mivantana amin’ny vahoaka tahaka izao.